Real Madrid vs Atletico Madrid: Walaaca Ancelotti Ee Dhaawacyada Ciyaarta Sabtida
HomeWararka MaantaReal Madrid vs Atletico Madrid: Walaaca Ancelotti Ee Dhaawacyada Ciyaarta Sabtida
Carlo Ancelotti waxa ku yaraan doonta kala xulashada ciyaartooyada marka ay Sabtida ciyaar adag isku waajihi doonaan Atletico de Madrid oo ay isku magaalo ka dhisan yihiin, isla markaana caan ku ah in ay ciyaar adag oo dagaal ku dhisan kala hor tagto kooxaha waaweyn. Waxa xusuus ah in kulamadii u dambeeyey oo dhan ay Atletico guul ka gaadhaysay Real Madrid.
Arbacadii waxa bilowgii ciyaartaba dhaawac kaga baxay Real Madrid difaaceeda koowaad ee Sergio Ramos, waxa isla qaybta hore isaguna garoonka ka baxay James Rodriguez oo ka dhaawacmay far ka mid ah lugtiisa bidix, waxaana la xaqiijinayaa in labadooduba ka maqnaan doonaan kulanka Sabtida. Luca Modric iyo Pepe ayaa iyaguna hore uga maqnaa oo u jiifatay dhaawac. Difaaca Bidix ee Marcelo oo kulankii Sevilla loo taagay Huruuddii 5aad, ayaa waxa ay Real Madrid ku guul darraysatay rafcaan ay ka qaadatay, waxaana khasab ah in uu ka maqnaado kulanka Sabtida ee Atletico Madrid.
“Sergio muruqa ayuu ka dhaawacmay iyo Jamaes oo farta lugta midig ka cawarmay, waan hubaa in ay maqnaan doonaan. Waxa naga maqan ciyaartooyo aad muhiim u ah, laakiin Nacho iyo Raphael Varane si fiican ayay u shaqeeyeen” sidaa waxa yidhi Tababare Ancelotti oo soo bandhigay walaaciisa.
Ciyaarta Sabtidu waxa ay ka dhici doontaa garoonka Calderon ee ay leedahay Atletico Madrid, waxaana la filayaa in ay ku adkaan doonto Ancelotti in ay ciyaartooyadiisu iska difaacaan weerarka daadka ah ee Atletico iyadoo ay ka maqan yihiin Pepe, Ramos iyo Marcelo. Haddii kooxda Ancelotti uu hoggaaminayo ay badiso kulanka Sabtida, waxa ay ka horreyn doontaa kooxda Simeone 10 dhibcood oo saafi ah, waxaanay ka caawin doontaa in markii u horreysay ay Real Madrid ku guuleysato horyaalka tan iyo sannadkii 2011-12.
Cleveland Cavaliers vs Miami Heat – Full Game Highlights | Jan 31, 2018
Arsenal vs Chelsea: Kulanka Sabtida, Sida Loo Doodo Ciyaartoyga Iyo Koox Laga Sameeyey Labada Kooxood
23/09/2016 Abdiwahab Ahmed